ezaposwa ngomhla 07 / 10 / 2018 by UDkt Patrick Young bha liweyo J147.
I-Alzheimer iyona nto ibangela ukugula komzimba, luhlobo lwesifo sengqondo sokubangela ingxaki engqondweni, ukucinga nokuziphatha. Iimpawu zisoloko zikhula ngokukhawuleza kwaye zenzeke ngakumbi ngexesha, ziba nzima ngokwaneleyo ukuphazamisa imisebenzi yansuku zonke.Isifo se-Alzheimer i-akhawunti ye-60 ipesenti kwi-80 ipesenti zeengxaki ze-dementia. Yaye ukuguga kukuyona ingozi enkulu kwizifo ezininzi, kubandakanya isifo se-Alzheimer (AD) nomhlaza.
Isizathu sesifo se-Alzheimer
Abaphandi bakholelwa ukuba akukho nto ebangela isifo se-Alzheimer. Ufumana njani isifo se-Alzheimer? Esi sifo sinokuvela kwimimandla emininzi, njenge-genetics, indlela yokuphila nokusingqongileyo. Iingcali zenzululwazi ziye zachonga izinto ezandisa ingozi ye-Alzheimer's. Nangona ezinye izinto ezinobungozi-ubudala, imbali yentsapho kunye nokuzalwa-ayikwazi ukutshintshwa, ubungqina obusakhulayo bubonisa ukuba kukho ezinye izinto esinokuzichaphazela.
Into eyaziwayo yengozi enkulu ye-Alzheimer iyanda, kodwa i-Alzheimer ayiyinto eqhelekileyo yokuguga. Nangona ubudala buyandisa ubungozi, akusiyo imbangela ngqo ye-Alzheimer's.
Uninzi lwabantu abanezifo zi-65 kwaye zikhulile. Emva kweminyaka eyi-65, umngcipheko we-Alzheimer uphindwe kabini kwiminyaka emihlanu. Emva kweminyaka eyi-85, umngcipheko ufinyelela phantse kwisithathu.
Kukho unxibelelwano phakathi kokulimala kwentloko kunye nomngcipheko we-future dementia. Khusela ingqondo yakho ngokubhinqa ibhande lakho lokuhlala, ugqoke i-helmet yakho xa uthatha inxaxheba kwimidlalo, kwaye "ukuwa phantsi" kwekhaya lakho.
Namhlanje, i-Alzheimer ihamba phambili ephando lwezolimo. Abaphandi bazama ukufumanisa iinkalo ezininzi ze-Alzheimer's disease kunye nezinye i-dementias ngokunokwenzeka. Ezinye zeyona nkqubela phambili ephawulekayo iye yacacisa indlela i-Alzheimer echaphazela ngayo ingqondo. Ithemba lukuqonda oku bhetele kuya kubakho unyango olutsha. Uninzi lweendlela ezinokuthi zingaphononongo emhlabeni jikelele.
I-Alzheimer's drug (izidakamizwa ze-AD): I-J147
Umntu ochaphazelekayo okwenza i-J147 ingahlaziywa kumamine / ama-hydrazines anamakhayo anokuthi abe ne-carcinogenic. Ukuhlolisisa oku kwenzeka, ukuzinza kokuxilongwa kweJ147 kwafundwa kwii-microsomes, kwiplasma yamagundane, nakwi-vivo. Kwa boniswa ukuba J147 (I-1146963-51-0) ayihlaziyikiyo kumamine amnandi okanye i-hydrazines, ukuba i-scaffold isisigxina kakhulu, kwaye iguqulelwe kwi-metabolites ezimbini okanye ezintathu kwi-metabolites, i-mouse, i-rat, i-monkey kunye ne-dog microsomes. Ukuhlolisisa ukhuseleko lwezi metabolites, senze zonke izilwanyana ze-metabolite zesibindi zezilwanyana kwaye zizilinga ukwenza umsebenzi wezinto eziphilayo kwiimvavanyo ze-neuroprotection. Akukho nanye kula ma-metabolites anetyhefu, kwaye ezininzi zeemetabolithi zinemisebenzi ye-biological efana neY147.
I-Alzheimer's drug (izidakamizwa ze-AD) abaviwa: CMS121
I-CMS121 yikamva fisetin. Kule minyaka embalwa edluleyo, sibonise ukuba i-florin flavonoid iyasebenza, i-neuroprotective, kunye ne-molocule yokuphucula ukuqonda. I-Fisetin inomsebenzi ochanekileyo we-antioxidant kwaye ingakwazi ukugcina ii-intracellular levels of GSH phantsi kwengcinezelo. Ukongezelela, i-fisetin inomsebenzi wesifo se-neurotrophic and anti-inflammatory. Uluhlu olubanzi lwezenzo lubonisa ukuba i-fisetin inokukwazi ukunciphisa ukulahleka komsebenzi wegazi ochaphazelekayo kunye neengxaki ezininzi. Nangona kunjalo, i-EC50 ephakamileyo kwi-esayini esekelwe kwiseli (2-5 μM), i-lipophilicity ephantsi (cLogP 1.24), i-tPSA ephezulu (107), kunye nokulahleka kwezinto ezinokungabikho kwemvelo kuye kwanciphisa i-fisetin ekuphuhliseni okuqhubekayo njengesigqirha seziyobisi.
Umngeni wawukujongana nokuphucula umthamo we-fisetin kwiindlela ezininzi ze-neuroprotective ngenkathi ngexesha elifanayo ukuguqula iipropati ze-physicochemical ukuba zihambelane kakhulu nezo mpahla ze-CNS (ubunzima bomzimba ≤ 400, cLogP ≤ 5, tPSA ≤ 90, HBD ≤ 3, I-HBA ≤ i7) .Iendlela ezimbini ezazisetyenziselwa ukuphucula i-fisetin. Ekuqaleni, amaqela e-hydroxyl ahlukeneyo aguqulwa ngendlela echanekileyo yokuphelisa i-sulfate / glucuronidate metabolites. Kwindlela yesibini, i-flavone scaffold yaguqulwa yaba yi-quinoline, ngoxa ngexesha elifanayo ligcina izinto eziphambili zesakhiwo se-fisetin. Ukusebenzisa indlela yethu yokufumanisa izidakamizwa ze-multitarget, siye savelisa inani elithathwe kwiimveliso eziphuculweyo kwi-oxytosis ye-neuroprotective ii-vitro ischemia. Imisebenzi emithathu eyongezelelweyo ye-fisetin yayigcinwa kwii-derivatives, kubandakanywa nokugcinwa kwe-GSH, ukuvimbela i-lipopolysaccharide ye-bacteria (LPS) yenze i-activation microglial, kunye nokwahlukana kweseli ye-PC12, umlinganiselo wesenzo se-neurotrophic. I-Flavone evela kwi-CMS-140 kunye ne-quinolone evela kwi-CMS-121 yi-600 kunye nama-400 amaxesha angaphezu kwamandla, ngokulandelanayo, kunokuba i-fisetin kwisilingo se-ischemia (Umfanekiso.) Ngoko ke, kunokwenzeka ukugcina iimpawu ze-polyphenol ngelixa ziphucula zombini i-physiochemical Iipropthiki ze-pharmacological zekhampani.
I-Alzheimer's drug (izidakamizwa ze-AD) abaviwa: ICAD31
I-CAD31 isifo sesifo se-Alzheimer (AD) umviwa okhethiweyo okhethwe ngokwamandla akhe okukhuthaza ukuphindaphinda kwe-cell embryonic stem cell-derived cell cell preseor cells kunye nakwi-APPswe / PS1ΔE9 AD. Ukuhambisa i-CAD-31 ekliniki, kwenziwa amalinge ukuze kuqinisekiswe iipropati ze-neuroprotective kunye ne-pharmacological, kunye nokuzama ukuphumelela kwindlela yokwelapha ye-AD.
Isingeniso esona sichaphazelekayo seMestallate acetate powder	Levonorgestrel: njani isebenza ngayo, isebenzise, ​​iziphumo ezibi